Football Khabar » च्याम्पियन्स लिग : आज मोस्कोविरुद्ध भिड्दै युभेन्टस, रोनाल्डोले समात्लान् लय ?
च्याम्पियन्स लिग : आज मोस्कोविरुद्ध भिड्दै युभेन्टस, रोनाल्डोले समात्लान् लय ?
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा इटालियन क्लब युभेन्टस र रसियन क्लब लोकोमोटिभ मोस्को आज समूह चरणअन्तर्गत चौथो खेल खेल्दैछन् । यो खेलका लागि युभेन्टस मोस्कोको घरेलु मैदानमाउत्रिँदैछ । खेल नेपाली समयअनुसार आज राति ११ः४० बजेबाट सुरु हुनेछ ।
समूह ‘डी’मा हाल युभेन्टस ३ खेलपछि ७ अंक बनाएर शीर्ष स्थानमा छ । समान ७ अंक नै भएको स्पेनिस एथ्लेटिको मड्रिड दोस्रो स्थानमा छ । आज युभेन्टसलाई आफ्नो घरमा भित्र्याउन लागेको मोस्को ३ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो सम्मिलित युभेन्टस आज अवे मैदानको यो खेल जितेर अन्तिम १६ को यात्रालाई थप बलियो बनाउने दाउमा छ । यसअघि आफ्नो घरमा मोस्कोलाई २–१ ले हराएको उसले आज मोस्कोलाई उसकै घरमा हराउन प्रयास गर्नेछ ।
आज अवे मैदानमा उत्रिँदा युभेन्टसका रोनाल्डो टिमको सहज जित र थप गोलको खोजीमा हुनेछन् । जारी सिजन मध्यमस्तरको प्रदर्शन गरिरहेका ३४ वर्षीय रोनाल्डोले च्याम्पियनस लिगमा भने ३ खेलबाट मात्रै १ गोल गरेका छन् । च्याम्पियन्स लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता रोनाल्डोका लागि प्रतियोगितामा ‘गोल स्कोरिङ’को उत्कृष्ट लय समात्न आजको खेल महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रकाशित मिति २० कार्तिक २०७६, बुधबार ०९:२६